Cinga ukugcinwa kweSitshixo seSitoksini kuNinzi kakhulu? Cinga kwakhona-NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, uMsasazo osasazisi we-NAB Bonisa - NAB Bonisa LIVE
I-Sound Lounge's Becca I-Falca Etyunjelwe Ukutyunjelwa I-Forbes "30 Ngaphantsi kwe-30"
ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » Cinga ukugcinwa kweSitshixo seSitoksini kuNinzi kakhulu? Cinga kwakhona
Cinga ukugcinwa kweSitshixo seSitoksini kuNinzi kakhulu? Cinga kwakhona
Jason Coari, uMlawuli wehlabathi, uMveliso kunye neSondlo lokuThengisa Quantum
Wonke umntu uyavuma ukuba i-flash iyakwenza umsebenzi ogqwesileyo. Kwaye nakwezinye iinkqubo kunye nemisebenzi yokusebenza, olo hlobo lwenkqubo lubonakala luyimfuneko. Ngokomzekelo, xa abahleli besebenza nemifudlana emininzi ye4K (okanye ngokuphindaphindiweyo, i-8K) yevidiyo, i-flash inganika uncedo lwamava olumkelekileyo olufunekayo ukudala umxholo obaluleke kakhulu.
Nangona kunjalo, kukho inkolelo ebanzi kwimveliso yezobugcisa kunye nezokuzonwabisa ezityebileyo zobuchwepheshe. Nini Quantum abaqeqeshiweyo bezonyango zevidiyo - ukusuka kwizindlu zangemva kwemveliso, imibutho yokusasazwa, ii-arhente zokudala, ii-studio kunye neenkcukacha zokuhambisa iinkcukacha kuwo wonke iNyakatho Melika, iYurophu kunye neAsia-ngaphezu kwengxenye yabaphenduli babhekise indleko njengeyona ndlela yokuphambili yokuhambisa izixazululo ezisezantsi.
Le nto yinyaniso yodwa, kwaye enye yodwa ixelela isigxina ibali. Iindleko zesisombululo sokugcina zonke ezibonakalayo ziza kubonakala zibiza kakhulu xa uhlalutyo lubona kuphela ixabiso lamanani okuthelekiswa ngamandla (i-$ / TB) kwi-SDD-based based solutions-based solutions. Nangona kunjalo, xa iindleko ezipheleleyo zobunini (TCO) zenziwa, kungabhekiseli kwintsebenzo, ukugcinwa kwefowuni, kunye nokugcinwa kwesikhombisi esicacisayo (NVMe), kugcinwa.
Izinto zokuqala kuqala - Yintoni i-NVMe?
Kuze kube nokuqaliswa kwe-NVMe, ukugcinwa kwe-flash-based-like-drives-state drivers (SSDs) - asetyenziswe i-SATA okanye i-SAS technologies ukuxhuma ukugcinwa kunye nayo yonke inkqubo yekhompyutha. Kodwa i-SATA kunye ne-SAS beyilungiselelwe ekuqaleni ukuxhasa ii-disk drive (i-HDDs), kwaye njengabavelisi baphuhliswe ngokutsha, ngokutsha ngokukhawuleza, kusetyenziswe i-SSD.
I-NVMe yenzelwe ngokukhethekileyo ukugcinwa kwe-flash-based. Nge-NVMe, umnqweno ngamnye weCCU uxhumana ngokuthe ngqo kunye nokugcina usebenzisa ibhasi ye-PCIe ephakamileyo kwi-SAS okanye iSAS interface. Ukusebenzisa i-PCI, i-flash-based based drives eyenziwa ngokuhambisana nememori endaweni ye-HDD yendabuko. I-NVMe ifinyelela ukusebenza okuphezulu kwinxalenye ngokuxhasa imiyalelo emininzi ngomgca, kunye neendlela zokunxibelelana, ngaphandle kweenkqubo ze-SATA okanye ze-SAS. I-SATA kunye ne-SAS nganye inomgca womyalelo owodwa, ongayifumana kwi-32 kunye ne-254 imiyalelo, ngokulandelanayo. Ngokwahlukileyo, i-NVMe inokuxhasa malunga namaqhosha e-65,000 kunye nemiyalelo ye-65,000 ngomgca.
Ukuthelekiswa ne-SATA kunye neSAS, i-NVMe yenza ukuba izicelo ezifundwa ngokukhawuleza zenzeke ngokukhawuleza. I-NVMe inokusingatha malunga ne-1 yezigidi ezingafundwayo ngokungaqhelekanga ngesibini, xa kuthelekiswa ne-SATA malunga ne-50,000 kunye ne-SAS malunga ne-200,000 efundwayo ngokungaqhelekanga ngesibini. Kwaye, kunye nabo bonke abafundayo, i-NVMe igcina i-latency phantsi kwe-microseconds ze-20, xa kuthelekiswa ne-500 microseconds ye-SATA ne-SAS. Kwabo
usebenzisa ukugcina ukuxhasa abaxhasi abaninzi abafuna imifudlana efana neenkcukacha, ii-SSD eziphezulu kakhulu kwi-HDD.
I-NVMe inokunikela ngokugqithisa okungaqhelekanga phezu kwenethiwekhi. Uvavanyo lwangaphakathi Quantum, Ukugcinwa kwe-NVM kufunyenwe ukuhambisa ngaphezu kwamaxesha e-10 ukufunda nokubhala ukusebenza kwe-output kunye nomxhasi omnye xa kuthelekiswa nabaxhasi be-NFS kunye ne-SMB.
I-NVMe iteknoloji ye-flash evumela abasebenzisi ukuba bangabi kuphela ukuvula ubungakanani bokwenene be-flash, kodwa ukwenza njalo ngoxa behlisa i-TCO. Izibonelelo zemithetho emininzi ngomgca, ukufundwa ngokukhawuleza, ukulandelwa kwezantsi kunye nokugqithisa okungaqhelekanga kunye nokunika i-NVMe ukunikela iindleko ezinyanzelisayo kunye nenzuzo.
Kwixesha elidlulileyo, ukusebenzisa i-flash yokugcinwa kwenethiwekhi kwakukho indleko enqabileyo ngenxa yemibutho esebenziselwa ukuxhumeka kweFiber Channel. Ukunxibelelana ngokuqhelekileyo kwindleko yesibini enkulu emva kokugcinwa kweendaba, kunye ne-Fiber Channel yokunxibelelana ingaba kathathu ukuya kwezine ngokubiza ngaphezu kwe-Ethernet.
Nge-NVMe, imibutho inokufumana ukusebenza okufana neFiber Channel usebenzisa i-teknoloji e-Ethernet eninzi eyindleko. I-teknoloji ye-Ethernet ivumela abasebenzisi ukugcina imali kungekhona kuphela kwizixhobo kodwa nakulawulo, kuba ulawulo lwe-Ethernet alufunanga izakhono ezizodwa zolawulo lweFiber Channel. Ngokuxhomekeke kubukhulu bombutho, kukho ithuba lokugcina amashumi amawaka - okanye ngamakhulu amawaka - iidola ekunxibelelaneni ngokusebenzisa i-Ethernet.
Lezo zindleko zodwa zihlala zicwangcisa utyalo-mali kwi-NVMe yokugcina.
Xa ucinga i-NVMe, akumele ibe yinto yonke okanye akukho nto
Xa abantu bacinga nge-NVMe, bavame ukuyijonga njengomnyama nomhlophe - yonke i-NVMe okanye akukho nto. Kodwa kukho indawo enkulu ebomvu ekufuneka ihlolwe kuyo. Injini eqhuba nayiphi na ipulatifomu ye-hardware ehambileyo kwisakhono sayo ngokupheleleyo. Ukuphunyezwa kwe-NVMe yokugcina kunye nefayile yefayili yanamhlanje kunye nesicwangciso solawulo lweedatha kunokukhulula indawo yokugcina indawo kunye ne-space yegama jikelele. Imibutho inokuthenga kuphela inani le-NVM egcinwe kwimisebenzi ethile ngelixa lisebenzisa ezinye iindlela zokugcina kunye nokubandakanya ezinye iindlela zokugcina izinto-kuquka i-disk-based arrays, iilayibhrari zeteksi kunye nokugcinwa kwefu - kwimisebenzi engafuneki inqanaba elifanayo lokusebenza. Ukukwazi ukudala indawo yokugcina i-hybridi ivumela imibutho ukunciphisa ukuthenga kwabo kwi-stored-based based storage, ngelixa bekunandipha zonke iinzuzo zabo.
Yiba negalelo, ungasebenzi
Nge-4K ngoku ngokuqhelekileyo kunye ne-8K ngokukhawuleza ibe ngumgangatho omtsha, umbono othile kunye nokucwangcisa namhlanje kuya kuvuna ukonga okukhulu kwixesha elizayo. Izixhobo zokugcina iziseko ezisisiseko se-Flash zinika amandla okuxhasa iifom ze-4K namhlanje, kwakunye nezo zangomhla ezibandakanya
8K nangaphezulu. Imibutho ehambisa iteknoloji esekelwe kwi-flash ukuxhasa ubugcisa bayo bokugcina izakubekwa kakuhle ukusebenzisana nezobuchwepheshe beNVMe zangoku nezizayo. Yaye njengoko ubomi benkonzo yale nkqubo iyakwandiswa, iindleko zokunciphisa izindleko ziya kuncipha - ukwenza utyalo-mali luqhube ngakumbi.
Kwiimibutho eziye zanciphisa okanye zithintela utyalo-mali kunye nokuthunyelwa ngenxa yeendleko eziphezulu ezibonakalayo zokugcinwa kwe-flash, ndiza kubuza imibuzo elandelayo:
· Ngaba ukuhlalutya indleko kuthathe iindleko zeziko lolwazi, iindleko zabasebenzi, izindleko zokunciphisa, kunye neendleko zokunxibelelanisa xa kuthelekiswa nenkqubo ye-HDD?
· Iyintoni intlawulo ehlawulwayo yokusebenza nganye kumxhasi, kungekhona amandla?
Ukuhlolisisa le mibuzo ngokunyaniseka kunokukukhokelela ekubeni ufumane iNVMe impendulo - kungekhona nangona iindleko, kodwa ngenxa yoko. Ngamanye amaxesha inyaniso ngokwenene kule nkcukacha.
Malunga noJason Coari
Jason Coari, uMlawuli wehlabathi, uMveliso kunye neSondlo sokuThengisa Quantum, unomdala kwi-computer yecomputer, kunye ne-20 iminyaka yamava kwiindawo zokuthengisa eziphezulu kunye nezithuba zokuthengisa ekukhokeliseni abathengisi beetheknoloji. UJason ukhokelela kwimveliso yenkampani kunye neqhinga loshishino lokugcina isitoreji kuzo zonke iicandelo. Ngaphambili, wasebenza kwiindidi ezahlukeneyo zehlabathi kwiSGI, ngokugqithiseleyo ihamba necebo le-HPC yokuthengisa umkhiqizo kwaye iholele imibutho yaseYurophu kunye ne-APAC yokuthengisa.
I-Broadcast Beat Magazine yi-Official NAB Show Media iqabane kwaye sigxininisa Ubunjineli boBume, iRadio & iTeknoloji yeThekhnoloji kwi-Animation, Broadcasting, Imifanekiso yeMotion kunye ne-Post Production industries. Sigubungela imicimbi yoshishino kunye neendibano ezifana ne-BroadcastAsia, CCW, IBC, SIGGRAPH, i-Digital Asset Symposium kunye nokunye!
Ukufundisisa okunzulu ngaphakathi - iirobhothi - Septemba 21, 2019
Umfoti kunye nomgcini wevidiyo - Septemba 21, 2019
Injini Yophuhliso - Septemba 21, 2019
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli SoftAtHome, MStar, iCES2017 Iintetho kunye nemisrya Injini yeVidiyo	2019-06-10
Previous: ULucky Finn Uvelise Izixhobo zokusebenza ze-Indipro zoLwazi lweMandla
next: I-ATSC 3.0: Ubungakanani bokuVuquka kwiNkqubo yokwenza
I-2019 NAB bonisa iprofayili yaseNew York: UKelley Slagle
I-2019 NAB bonisa iprofayili yaseNew York: Amy DeLouise
I-NAB bonisa iNqaku lePodcast leNew York leZinto eziTyhidiweyo kunye neziSeko eziPheleleyo zePodcast
Iinkonzo zeWebhu ze-Amazon Inc. Ziza kubonisa i-Cloud Workflows entsha yokuYila indalo kwi-IBC 2019
I-2019 NAB bonisa iprofayili yaseNew York: UJem Schofield
I-NewTek Ushers Evolution ye-Software-echaziweyo yokuBalisa amaBali kwi-IBC 2019
Ukufundisisa okunzulu ngaphakathi - iirobhothi
Umfoti kunye nomgcini wevidiyo
I-Freelance Videologist ImpactClub ®
Umgangatho wokungena kwiGrafic Designer
Injini yokubonakalayo yeSandi oBonakalayo